Lampard oo ka hadlay guuldarradii kooxdiisa Chelsea ay kala kulantay Liverpool – Gool FM
Dajiye September 21, 2020
(London) 21 Sebt 2020. Frank Lampard ayaa aaminsan in Chelsea ay awooday inay barbaro ka hesho kulankii Liverpool, kaasoo ku dhamaaday 0-2 ay ku adkaatay Reds, laakiin wuxuu muujiyay inuu ku faraxsan yahay waxqabadka naadiga Blues.
Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa sii wadata guulaheeda xiriirka ah ee horyaalka, waxaana ay garaacday Chelsea oo laga qaatay kaarka cas, taasoo ku ciyaaraysay 10 ciyaaryahan, waxaana goolasha Reds u dhaliyay Sadio Mane.
Lampard ayaa ciyaarta kaddib wareysi uu ku bixiyay shabakada “Sky Sports” wuxuu ku sheegay:
“Waan ka xumahay guuldaradii 0-2 aheyd, laakiin maanta aad ayaan uga faraxsanahay sidii aan ahaa kaddib Brighton”.
“Wali waxaan ku jirnaa marxalada bilowga ee xilli ciyaareedka, waxaan arkay niyadda qaar badan oo ka mid ah ciyaartoyda, waana inaan inbadan noqonaa kuwo geesiyaal ah”.
“Waa inaan helnaa waqti aan ku dhisno kooxda, Koox kasta oo si fiican u soo bandhigtay kubadda cagta casriga ah waxay u baahan tahay waqti, waxaana hadda sameyneynaa bilow fiican”.
“Waa inaan Kepa Arrizabalaga siinaa kalsooni badan, maadaama goolhayayaashu ay u baahan yihiin kalsoonidaas, waa run inuu qalday kubadda goolkii labaad, waana qirsanahay taas”.
“Waan ku guuleysanay inaan joojino iyaga qeybtii hore, waxaana filayay inaan sii adkaan doono, wixii intaas ka dambeeya, Kepa waa inuu sii wadaa shaqada kaddib qaladkan uu sameeyay”.
“Ciyaar barkeeda aan ciyaarnay looma xukumi karo wax kayar sidii aan filaayay, waan ku faraxsanahay niyada shaqada kooxda, waxaa jiro waxyaabo badan oo na sugaya inaan qabano”.